I-Ajax, ukhuseleko ngaphandle kwamacingo kwikhaya lakho | Ndisuka mac
I-Ajax, ukhuseleko ngaphandle kwamacingo kwikhaya lakho
UMiguel Gaton | | Izixhobo
Namhlanje sikuzisa ubungqina be Inkqubo yokhuseleko yeAjax, Isindululo esinomdla kakhulu sokuseka inkqubo yakho yokhuseleko lwasekhaya kwaye akukho mfuneko yeentambo, ngaphandle kwentlawulo yenyanga kunye nenkqubo yemodyuli ehlengahlengiswe kwiimfuno zomsebenzisi ngamnye. Kwaye konke oku ngaphandle kokunikezela ngemveliso enoyilo oluyinyani oluya kukunceda ukuba ungaphuli uyilo lwekhaya lakho.
1 Ukhuseleko lomgangatho ophezulu
2 Ikhithi yethu yokhuseleko
3 Ayinantambo, inebanga elide kunye nobomi bebhetri obude
4 Ukulungisa izinto
5 Sala kakuhle kwimirhumo yenyanga
Ukhuseleko lomgangatho ophezulu
Xa ucinga ngesidingo sokubonelela ikhaya lakho ngenkqubo yokhuseleko, uyifumana iindlela ezimbini kwimarike: Kulungile ukuqesha iinkonzo zenkampani ekhethekileyo ukunyusa olu hlobo lwenkqubo okanye seta eyakho inkqubo zilungelelaniswe neemfuno zakho. Ukhetho lobuchwephesha luhlala lulula kodwa lubiza kakhulu, kuba akukho mfuneko yokuthatha iindleko zenkqubo yokhuseleko kunye nofakelo, kodwa kunye neyona ndleko iphezulu yazo zonke: imirhumo yenyanga.
Ukungancedi ekumiseni inkqubo yakho ngeqonga elifana neKhaya likaGoogle okanye i-Alexa kukuba bahlala beneziphene ezininzi kwinqanaba lokhuseleko xa kuthelekiswa nezisombululo ezizodwa.
I-Ajax, kwelinye icala, ikunika isisombululo phakathi kwezi nkqubo zombini kodwa ngezibonelelo zazo zombini: a Inkqubo yokhuseleko onokuzihlanganisa, ngofakelo olulula ngokwenene ngaphandle kweentambo kunye nezinto eziyilelwe ngokukodwa ukhuseleko. Kuvakala kulungile?
Ikhithi yethu yokhuseleko
Ngale ndlela, kwimeko yethu sikhethe ukuyinyusa le nto ukhuseleko kit (nangona umntu ngamnye enokukhwela leyo ihambelana neemfuno zabo):
Indawo ye-2: yeyona nto iphambili kwinkqubo yokhuseleko kwaye inoxanduva lokulawula zonke. Sisiseko esinonxibelelwano lwe-Ethernet, ubomi bebhetri ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-16 kunye nemimandla emibini ye-microSIM ukuze isebenze nangaphandle kokubonelelwa ngombane. Eli candelo lilo kuphela elifuna iintambo kwikhithi yonke
Rex: Isiphindaphindo somqondiso esikuvumela ukuba wandise uluhlu lwazo zonke izixhobo zeAjax. Into ebalulekileyo ukuba sifuna ukukhusela iindawo ezinkulu ezinjengeeofisi ezinemigangatho eliqela, isakhiwo esinomhlaba okanye izinto ezinje.
StreetSiren: I-siren yangaphandle ethi ngesandi kunye nezibane ikwazi ukulumkisa ngokungena.
Ikhuseleko lomliloInzwa eya kuthi ibone umsi kunye nokunyuka ngequbuliso kweqondo lobushushu elenzeka emlilweni. Isixhobo sine-siren eyakhelwe-ngaphakathi ngenxa yoko awudingi ukufaka i siren encedisayo.
I-MotionProtect Outdoor + Hood- Ipakethi yesixhobo sokuhamba ngaphandle esingena cingo kunye nesigqubuthelo sokuzikhusela kwimvula, elangeni okanye kwikhephu.
Intshukumo Khusela Plus: isixhobo sokungena ngaphakathi esenzelwe ngokukodwa iindawo ezinamagumbi anomoya opholileyo okanye indawo yokubasa umlilo kuba ayiphenduli kolu hlobo lwento ukuthintela ii-alamu zobuxoki.
Ukukhusela i-Glass: isixhobo sokujonga iglasi esincinci ukuze sibeke kwiifestile.
UmnyangoProtect Plusisixhobo sokuvula umnyango, ukongeza ekuvulekeni ngokwaso, esikwaziyo ukubona ukungcangcazela kunye nokutshintsha kokuthambekela.
Ezi zizinto esizivavanyileyo kuseto lwethu, kodwa Ukuba ufaka iwebhusayithi yeAjax ungayibona ikhathalogu yayo ebanzi yezixhobo ezikhoyo kuzo zonke iintlobo zeemfuno ezinje ngamaqhosha othusayo, izixhobo zokujonga zonke iintlobo, iiplagi ezi-smart, iikeyboard zangaphandle zokungenisa amagama agqithisiweyo, ii-remote control ngohlobo lwesitshixo, njl.
Ayinantambo, inebanga elide kunye nobomi bebhetri obude
Njengoko sele sibonisile, enye yamandla enkqubo yeAjax yeyayo ufakelo olucocekileyo nolicocekileyo kuba zonke izinto ezisebenza kunye neebhetri ezihlala ixesha elide kwaye akukho mfuneko yokuba sibeke ezinye iintambo endlwini yethu. Akunyanzelekanga ukuba ukhathazeke malunga nokuba indawo leyo ine-Wifi cover, kuba iinkqubo ze-Ajax zisebenzisa a Umthetho woqhagamshelo lobunini obizwa ngokuba yi "Jeweler" kwaye ofumana ngayo oonomathotholo bentshukumo engaphezulu kwe-2.000 yeemitha zesikwere kwaye ukuba xa kukho imfuneko unokwandisa nangakumbi umbulelo kumphindisi weRex.
Enye yezona zinto zibalulekileyo zale protocol kukusebenzisa kwayo amandla okuvumela izixhobo zeAjax iminyaka emininzi yobomi bebhetri. Kwaye xa kukho imfuneko, emva kweminyaka embalwa iibhetri zinokutshintsha endaweni yazo ngendlela elula kwaye ngexabiso elifanelekileyo kuba ziibhetri eziqhelekileyo neziqhelekileyo.
Phantse zonke izixhobo zeAjax ziza nefayile ye- Iteyiphu emacaleni ephindwe kabini, ezihamba kunye nobunzima bazo obulula zenza ukuba kube lula ukuzifaka naphina akukho mfuneko yoqheliso okanye imingxunya. Cima nje iteyipu kwaye uyincamathisele naphi na apho uthanda khona, bamba uqinise okomzuzu ukuze unamathele ngokugqibeleleyo, kwaye ugqibile.
Ukuba ufakelo lomzimba wekhithi lulula kakhulu, inkqubo yoqwalaselo ayibuyi mva. IAjax inesicelo (Ivenkile yosetyenziso y Google PlayIntuitive kakhulu onokumisa ngayo zonke izixhobo nganye nganye. Kuya kufuneka kuqala uqwalasele isiseko (hub) emva koko Skena ikhowudi yeQR nganye yezixhobo, Yinike igama elifanelekileyo kunye negumbi, kwaye nonke nilungele ukuhamba.
Njengoko ubona kwizikrini eziphezulu, iifayile ze app Kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Kwimizuzu embalwa yokuziqhelanisa uya kuba nakho ukulawula yonke inkqubo ukusuka kwiselfowuni ngoxolo olupheleleyo lwengqondo.
Sala kakuhle kwimirhumo yenyanga
Njengoko sibonisile ekuqaleni, le nkqubo yokhuseleko ihlanganiswe nguwe kwaye naphantsi kweemfuno zakho. Awunyanzelekanga ukuba uhlawule nayiphi na imali yenyanga kodwa i-Ajax iyakuvumela ukuba wenze njalo kwaye ngenxa yoko uluhlu olude lweenkonzo ezihambelana nenkqubo yakho.
Inkqubo yoKhuseleko yeAjax
Akukho mrhumo wenyanga
Ayinayo iikhamera zayo (kuphela kubantu besithathu)
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » I-Ajax, ukhuseleko ngaphandle kwamacingo kwikhaya lakho
Ngoku ungabhalisela iiseshoni zeAdobe MAX 2021 zasimahla
ICloud yeWindows ihlaziywa ngento entsha yokhuseleko lwakho